Android လုလင်: July 2014
ဖျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေကို ဖုန်းထဲမှာတင် ပြန်လည်ရှာဖွေပေးနိုင်မယ့် Undelete for Root Users 2.1.3.11 apk
ဒီ App ကတော့ မိမိတို့ရဲ့ Android Device ထဲက မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေရယူ ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ကွန်ပျူတာအကူအညီမလိုဘဲ Android Device ထဲမှာတင် ပြန်လည်ရှာဖွေရယူပေးနိုင်တာကြောင့် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့.. ကိုယ့်ရဲ့ Android ကို Root ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး Android Version 2.3.1 နဲ့အထက်တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
Recover deleted the root user's ~ ~ Android application that allows you to recover any deleted files stored FAT format from your SD card or any connection.
With 1000 file types supported, Undelete can come in handy if you accidentally deleted photos or want some old tunes to listen to the way to go.
Undelete can safely erase and destroy files, making them impossible for others to recover -auseful device in your repair or sell when it did.
Undelete For Root Users (recover deleted) features　★ restoration has not yet been written to any file
★ security erase / destroy files
★ with documents, images, video, music, files and binary engineering
thumbnail preview generation ★
★ batch operation
★ custom folder recovery
★ preview the media file
if No unlock button, the application will only be able to restore the image file. Please buy the key to unlock the full functionality.
Currently, only support FAT. On most devices, which means that only the external SD support.
Was found after scanning, the data may not recover some files can be damaged beyond repair, just like desktop solutions.
Download : 3.59 MB
ရေးတဲ့အချိန် 1:19 PM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Coolpad 7232 Flashtool Firmware
Coolpad 7232 အတွက် Flashtool Firmware ကို Error တစ်စုံတစ်ရာ တက်လို့ Firmware ပြန်ရေးချင်တဲ့
သူတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်သမားတွေကတော့ ဆောင်ထားတာ မမှားပါဘူးဗျာ။
Download Here on Dev-Host.com
Downloa Here on Mediafire.com
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM 12 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ Coolpad Firmware
All Coolpad Firmware Download List
Coolpad 5109 -Myanmar Font Firmware >>>> http://d-h.st/XiH
Cool 5310 Firmware >>> http://www.coolpad.cn/product/download/downloadInfo/downloadInfo.html?downloadInfoBO.downloadInfo.mobileType=5310#downListUL
Cool 7060 Firmware >>> http://www.coolpad.cn/product/download/downloadInfo/downloadInfo.html?downloadInfoBO.downloadInfo.mobileType=7060#downListUL
Cool Great God F1 Mobile (8297) >>> http://www.coolpad.cn/product/download/downloadInfo/downloadInfo.html?downloadInfoBO.downloadInfo.mobileType=大神F1移动版（8297）#downListUL
Cool 7296 Firmware >>> http://www.yulong.com/product/download/downloadInfo/downloadInfo.html?downloadInfoBO.downloadInfo.mobileType=7296#downListUL
CoolPad F1 8297W firmfware >>> https://drive.google.com/uc?id=0B5eaHbOcyGsnWVR4NlNxSHdqRGM
Coolpad8297_td_ColorOS2.0_2_140522-atx-ry09iu.zip >>> http://pan.baidu.com/wap/link?uk=2636725279&shareid=1993960383&third=0
CoolPad 5890 Firmware >>> https://drive.google.com/uc?id=0B5eaHbOcyGsnZmowdUhtMlhkWE0
Cool 5108 Firmware >>> http://www.coolpad.cn/product/download/downloadInfo/downloadInfo.html?downloadInfoBO.downloadInfo.mobileType=5108
Cool new 7295 (7295c) >>>> http://www.coolpad.cn/product/download/downloadInfo/downloadInfo.html?downloadInfoBO.downloadInfo.mobileType=全新7295
Cool 5216D Firmware >>> http://www.yulong.com/product/download/downloadInfo/downloadInfo.html?downloadInfoBO.downloadInfo.mobileType=5216D#downListUL
CoolPad 7295A Firmware >>> https://drive.google.com/uc?id=0B5eaHbOcyGsnOExsbHlFdlhVMlk
CoolPad 7295c Firmware >>> https://drive.google.com/uc?id=0B5eaHbOcyGsnS3ZuYVZjNDRBTVk
CoolPad 7231 Firmware >>> https://drive.google.com/uc?id=0B5eaHbOcyGsnZVI5a2FaNzR0Z0U
Cool 5218D Firmware >>> http://www.yulong.com/product/download/downloadInfo/downloadInfo.html?downloadInfoBO.downloadInfo.mobileType=5218D#downListUL
Cool 5010 Firmware >>> http://www.yulong.com/product/download/downloadInfo/downloadInfo.html?downloadInfoBO.downloadInfo.mobileType=5010#downListUL
အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ
။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM 17 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ App များသာရပါသည်။
Icon Design By Han Zaw Oo
Font By Kyaw Swar Twin
Product Of MMSD
Playstore က ဒေါင်းနိုင်သူများဒေါင်းပေးပါအုံး။
မဒေါင်းနိုင်တဲ့သူများလဲ ဒီ Link မှာ ဒေါင်းပြီး
Playstore မှာတော့ Vote ပေးပါအုံး
ရေးတဲ့အချိန် 2:28 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
CoolPad 5109 ( မြန်မာစာ + Frozen Keyboard ) Firmware
Coolpad 5109 အတွက် မြန်မာစာနှင့် မြန်မာကီးဘုတ်ပါဝင်ပြီးသား Firmware လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်။
Firmware ရေးဖို့အတွက် Tool တွေနဲ့ Driver ဖိုင်တွေပါတင်ပေးထားပါတယ်။
Download ဆွဲလို့ရလာတဲ့ဖိုင်တွေအကုန်လုံးကိုဖြည်ပါ။QDL_Phone.exe ကိုဖွင့်ပြီး Tool မှ File Patch တွင် 2.3.003.P1.140318.5109 ဖိုဒါထဲမှာ arm11 ဖိုဒါကိုရွေးထားပါ။
စက်ကို Vol- နှင့် Power ဖိပြီး fastboot ၀င်ပါ။Fastboot အနေထားမှာ ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ပါ။
Tool မှ ARM 11DL ကိုနှိပ်ပီး Firmware ရေးနိုင်ပါပြီ။လိုအပ်တဲ့ သူများ Download ယူနိုင်ပါပြီ။
ရေးတဲ့အချိန် 11:20 AM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Google Play Store က Free ပေးတဲ့ Game , App တွေကို IDM နဲ့ ဒေါင်းယူနိုင်ပြီ
ကဲအပြည့်စုံ သိချင်တယ် ဆိုရင်ဒေါင်းလိုက်ဗျာ
စာအုပ်လေးရယ် ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရယ် ထည့်ထားပေးတယ်နော်
ဒေါင်းရန် ... ဒီမှာ ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ၀င်ရောက်ဒေါင်းယူပါဗျာ
ကိုဝင်းကမ္ဘာကျော် မှ မှတ်တမ်းပြုစု ပြန်လည်မျှဝေသည်
Bagan Keyboard Premium V-4.4 Cracked
ကျနော် အကြိုက်ဆုံး android key board လေးပါ ပြည်ပရောက် မိတ်ဆွေများအတွက် ရည်ရွယ်တင်ပေးပါသည် မြန်မာပြည် မှာ တော့ ၀ယ်သုံးလို့ရပါသည် အဆင်ပြေကြပါစေ
ဒေါင်းရန် ... ဒီမှာ ဆိုတာကို နှိပ်ပြီးဝင်ရောက်ဒေါင်းယူအသုံးပြုနိူင်ပါသည်
ရေးတဲ့အချိန် 3:35 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဒီ apk ကို ရတာနဲ့ ဖုန်းမှာ install and open လုပ်ထားပါ။ အခြားဘာမှထပ်လုပ်စရာမလိုဘဲ အာဇာနည်နေ့ နံနက် 10 နာရီ 37 မိနစ်တိတိမှာ ၂မိနစ်ကြာ ဥသြသံထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥသြသံပြီးတာနဲ့ ဒေါ်မေလှမြိုင်ရဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအားအလေးပြုပါသည် သီချင်းဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကိုက်တပြိုင်နက်သံပြိုင်ဥသြသံထွက်ပေါ်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း မမေ့မလျော့ install လုပ်ထားကြပါ
ရေးတဲ့အချိန် 2:11 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Huawei c8816 မှာ mectel ဖုန်းတွေအတွက်အင်တာနက် setting ချိန်နည်း
Huawei c8816 မှာ mectel ဖုန်းတွေအတွက်အင်တာနက် setting ချိန်နည်း ကိုတင်ပေးမှာပါ။
ကျနော်လည်းအတော်တိုင်ပတ်ခဲ့တာပါ ပုံမှန်တိုင်းချိန်နေကြအတိုင်းနဲ့ ချိန်ပေးမယ့်လည်း မရနိုင်တဲ့
mectel ဖုန်းတွေအတွက်အင်တာနက် setting ချိန်နည်း ပေါ့ ခုတော့အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်သွားပြီဗျာ။
ကျနော်ကိုယ်တိုင် အဆင်ပြေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ နည်းမို့ယုံယုံကြည်ကြည် ချိန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Name မှာ mpt
Apn မှာ #777
user name မှာ card@c800.mm
password မှာ card
Apn type မှာ default
Authentication type မှာ PAP or CHAP
Apn protocol မှာ IPv4
Apn roaming protocol မှာ IPv4
Promt password မှာ #777
ပြီးရင်တော့ save လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ကိုယ် setting ချိန်ထားတာကို အစက်လေးပေါ်အောင်ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ရပါပြီ Mobile data ကို On ကြည့်လိုက်ပါ။
မတက်သေးရင်တော့ ဖုန်းကို restart တစ်ခေါက်ချလိုက်ပါ။
ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက
အကြောင်းအရာ internet setting ချိန်နည်း
ဖျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေကို ဖုန်းထဲမှာတင် ပြန်လည်ရှာဖွေပေ...
MM App Font Helper (G730-U00 ကဲ့သို့သောဖုန်းများတွ...
CoolPad 5109 ( မြန်မာစာ + Frozen Keyboard ) Firmwa...
Huawei c8816 မှာ mectel ဖုန်းတွေအတွက်အင်တာနက် sett...